Ndị na -emepụta usoro nnu na ose | China Nnu na ose Series Factory & suppliers
Nnukwu ụlọ ọrụ 100ml nnu nnu na ose ose
A na -ekekarị igwe ihe na -esi ose ụzọ abụọ: igwe nri akwụkwọ ntuziaka na igwe ihe ọkụ eletrik. A na-ekeji igwe ihe ose na-ere ahịa n'ahịa ka ọ bụrụ arụrụ arụ na nke anaghị agbanwe agbanwe.
Na mbụ, a na -ejikarị igwe ihe nnu na ose na kichin ndị China, mana ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọgbara ọhụrụ na -amalite iji ya. Mana ọ bụ n'ezie adaba igwu ose, nnu na ose. Ndị ọdịda anyanwụ na -elebara ịdị ọcha anya. Ndị Ọdịda Anyanwụ oge ochie na-eche na a na-ahazi ha n'ụlọ nrụpụta ihe, na ihe dị iche iche nwere ike gwakọta n'ime ha. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na enwere ọtụtụ igwe nri na tebụl kichin nke ụlọ ọ bụla.
Nkọwapụta, igwu ihe bụ ọrụ otu na -agbanwe ihe siri ike ka ọ bụrụ obere irighiri ihe. Na China, ọ bụghị naanị na a na -egwe nri maka ọka kamakwa ejiri ya mee ihe maka ọgwụ, mana itinye nri ka dị ntakịrị “umengwụ.” Ọ bụ-ose.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ose dị ọcha na nke na-esi ísì ụtọ ka ịgbakwunye ụtọ nri gị, ma ị nweghị oge buru ibu iji kpachapụ anya ghee ya, ihe dị mfe, dị mfe, ịchekwa oge na igwe na-echekwa ọrụ nwere ike inyere gị aka. .
Onye na -egwe ose bụ ngwaahịa kichin a na -eji egwe ose, nnu mmiri, ngwa nri na ihe ndị ọzọ. Ya mere, a pụkwara ịkpọ ha ihe nnu nnu ma ọ bụ igwe nri. Ike ose nke esicharala dị iche na -egwe nri n'onwe ya na ụtọ na ụtọ, ya mere ọtụtụ ndị mmadụ na -ahọrọ iji ihe na -egwe ose.